Ankadilalana : 4X4 nanakan-dàlana, voatery nisaoty tamboho ny mponina
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → septembre → 2 → Ankadilalana : 4X4 nanakan-dàlana, voatery nisaoty tamboho ny mponina
Redaction Midi Madagasikara 2 septembre 2019 5 Commentaires
Iray andro sy tapany ny olona tsy tafavoaka ny tanànany. (sary nomena)
Kivy tanteraka ny olona no sady sosotra. Tsy nisy azo natao anefa satria tsy hita ny mpamily ny fiara. Efa ho iray andro sy tapany no nipetraka teo ity fiara tsy mataho-dàlana mitondra ny marika Nissan Patrol, ary eo amin’ny làlana izay ifamezivezen’ny olona ao anaty fokontany kely iray no tapaka vokatr’izany. Nanomboka ny zoma alina no efa nipetraka teo ilay fiara ary tsy niala teo raha tsy ny alahady tolakandro,rehefa nokarohin’ny mponina niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana ny tompony, avy amin’ny laharan’ny fiara. Teo ary vao fantatra, fa ny saoferan’ilay fianakaviana no nitondra io fiara io ary nilaza ireo fa tsy fantany akory ny fisian’ny fiara izay nipetraka tany ho any. Rehefa nandeha ny fialan-tsiny toa ny mahazatra, dia nilamina teo ihany ny raharaha ary tsy nitondra lavitra izany ny olona na dia sosotra tanteraka aza. Ilay mpamily rahateo tsy hita izay nisy azy hatramin’ny alahady izay nangalana ny fiara teny Ankadilalana. Raha any ivelany, dia tsy niandry ela mihitsy dia efa tonga ny fiarabe izay mpibata fiara mibahan-dàlana ary tsy misy hantra ho an’izay tompony na izay mety ho antony nipetrahany teo. Tamin’ity raharaha ity tokoa mantsy, dia nisy ny feo fa hoe an’ny fiadidiana ny Repoblika ny fiara, izany anefa dia entina fotsiny handemena ny olona, raha araka ny fanazavan’ny mponina. Amin’ny lafiny hafa koa dia azo itarafana ny tsy fisian-tsain’ny mpamily sasany ny toy izao. Raha simba ny fiara ka tsy azo nanoharana ny fihetsehany, mety ho azo eritreretina ihany, fa na izany aza dia anjarany ny mitady vahaolana maika fa tsy ny olona akory no voatery misaoty tamboho vao tafavoaka ao amin’ny tanànany. Ny atao hoe mahazo alàlana hitondra fiara, dia tsy mijanona eo amin’ny fahaizana manamory, fa indrindra koa eo amin’ny adidy sy andraikitra mifandraika amin’izany.
jocelyn 3 septembre 2019 at 14 h 36 min · Edit
Fa angaha tsy nety rana niditra teto @ varavaran’ny fiara hita avy aty io, nivoaka @ varavarana avy ary ambadika avy eo ka ?
Baleda charles 2 septembre 2019 at 21 h 52 min · Edit
Ekena sy tokony hotanterahana io
Hasina 2 septembre 2019 at 11 h 36 min · Edit
Ny eny aminay ANOSIZATO ATSINANANA II, dia tamboho fanakanan-dalana miditra mankao aminay izay Tanana efa ho 39 taona (titré – borne) no natsangan’ny tompon’ny tany vaovao izay Malagasy ihany.
Misy fianakaviana folo – Toeram-pianarana (primaire hatramin’ny Terminale: 30 taona nitsanganana) ary Toeram-pitsaboana ao amin’io Tanana notampenana io. SAMY ARA-DALALA daholo ny ireo ARA-PANJAKANA (Autorisation d’ouverture).
Nahazo permis de construire avy amin’ny CUA ny tompony ka nanangana tamboho 3 metra ny hahavony tao anatin’ny 3 andro monja. NATSAHATRY NY FITSARANA ANEFA IO FAHAZON-DALANA IO fa ny TAMBOHO KOSA MBOLA AO.
Tsy misy lalana ny Mponina Fianakaviana 10 trano, ny Mpianatra ary ny Marary.
MANAINGA NY TOMPON’ANDRAIKITRA ISAN’AMBARATONGA MBA HIJERY NY RAHARAHA.
Hasina 2 septembre 2019 at 11 h 23 min · Edit
Io ary fiara fa ny eny aminay ANOSIZATO EST II (ampitan’ny arrêt taxibe) dia Tanana efa niorina efa ho 39 taona no nasian’olona vao nahazo ny tany tamboho.
Misy fianarana (primaire hatramin’ny lycée) sy toeram-pitsaboana, izay samy ara-dalàna daholo ny fisokafany.
Nahazo autorisation de construire tamin’ny CUA (izay tsy nisy fidinanana ifotony) akory ilay mpanangana tamboho.
Ny teny amin’ny Fitsarana nilaza fa « incompetent » amin’ilay raharaha.
Efa ho 4 herin’andro izao no tampina ny fidirana mankao amin’io Toeram-pampianarana sy Toeram-pitsaboana sy fonenan’ireo Fianakaviana ireo.
Manainga ny Tompon’Anndraikitra isan’isany avy mba handray ny andraikitra tandrify azy.
Matotra 2 septembre 2019 at 9 h 21 min · Edit
Tena mila fandraisana fanapahan-kevitra ny toy izao,tokony ampiasaina eto amintsika ny voitures de fourière
Tsy hanavahana na lahy na vavy , na manam-pahefàna na tsia fa rehefa manao ny tsy mety dia mandray sazy.